adyaminnyherisetra Archives - Book News Madagascar
Hevi-draikitra eo amin’ny fiarahamonina Malagasy ny fiheverana ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy. (more…)
Fananahana – Mbola maro ny Malagasy tsy mahafantatra ny heviny
Nitondra fanentanana momba ny fananahana hoan’ireo zatovolahy ao Amboditsiry ny Ecpat France. (more…)
Ady amin’ny herisetra – Tovolahy 20 no nahazo fiofanana teny Ambohidroa
Mbola maro ireo olona mametraka ny lehilahy ho ambony nohon’ny vehivavy. Ny fiarahamonina dia mametraka ny lehilahy ho matanjaka sy mahery. Noho izany dia misy ny fiofanana momban’ny “toetra tena maha lehilahy”. Tanjona ny hanovana ireo hevi-diso apetraky ny fiarahamonina. Tsy tokony hisy ny fitsinjarana mitanila. Tokony hitovy ny lehilahy Read more…
Ady amin’ny herisetra: nanentana tanora momba ny « genre sy stéréotype » ny Ecpat France
Mitohy hatrany ny fanentanana ataon’ny Ecpat France amin’ireo tovolahy ao Andoharanofotsy. (more…)